KABARY – FIMPIMA: faranana ny taon-jobily faha-55 | NewsMada
KABARY – FIMPIMA: faranana ny taon-jobily faha-55
Fandaharam-potoana roa lehibe no handrafitra ny famaranana ny fankalazana ny taon-jaobily faha-55-n’ny Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy (Fimpima). Ny 28 jona ho avy izao, eny amin’ny lapan’ny Akademia Malagasy eny Tsimbazaza, velakevitra « Tombon-dohany ho an’ny endriky ny kabary malagasy ankehitriny, miorim-paka amin’ny nentin-drazana ». Hanatontosa izany i Nalisoa Ravalitera sy Ranjatohery Harilala (mpikambana Fimpima sady mpikambana mahefa ao amin’ny Akademia malagasy). Ao ihany koa ny fampisehoana kabary sy fizarana mari-pankasitrahana ho an’ireo mpikambana tranainy.
Amin’io andro io ihany fa manomboka amin’ny 8 ora alina, hotontosaina ao amin’ny Carlton Madagascar etsy Anosy ny « Alin’ny mpikabary ». Hanimpitoloha sy totorebika mandra-maraina iarahana amin’ny Sanda mozika. Filatroana miaraka amin’ny Haihaingo, ialohavan’ny seho kanto. Hisy fisarihana loka maro toy ny tapakila fiaramanidina mandroso sy miverina (Tana – Paris – Tana sy Tana – Dubai – Tana), sns.
Anisan’ny voalaza nandritra ny fampahafantarana ity hetsika ity tetsy Antsahavola, omaly ny hoe : « Fimpima : Velona sy miasa, mivoatra sy mandroso, ary mivelatra maneran-tany. Fimpima : elatry ny kolontsaina malagasy ».